थाइराइड'का रोगी'ले भूलेर पनि नखानु'होस् यी ५ कुरा, नत्र पछु'ताउनु प'र्ला ! –
June 27, 2021 June 27, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on थाइराइड’का रोगी’ले भूलेर पनि नखानु’होस् यी ५ कुरा, नत्र पछु’ताउनु प’र्ला !
थाइराइड एक प्रकारको हर्मोन हो। हाम्रो थाइराइड ग्रन्थीले शरिरबाट आयोडिन लिएर यसलाई बनाउँछ।यो हार्मोन हाम्रो मेटाबोलिजमलाई कायम राखिराख्नका लागि आवश्यक हुन्छ।
जब यो ग्रन्थीले कुनै कारणवश धेरै हर्मोन बनाउन थाल्छ, त्यतिबेला थाइराइड बढ्ने गर्दछ।थाइराइड बढ्दा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्छ।महिलाहरुमा यो रोग बढि देखिन्छ। यो रोग लागेपछि छटपटी हुनु, राम्रोसँग निन्द्रा नलाग्नु, महिनावारी गडबड
सार्वजनिक यातायात’को भाडा ब’ढ्ने, कहिले देखि खु’ल्छन् गा’डी ?